Ivesi eliqhelekileyo liphezulu
Njengokuba kunjalo nezinye izenzi eziqhelekileyo, ukudibanisa kwe- poner , edlalwa ngokuthi "ukubeka" okanye "ukubeka indawo," ayikho into engavamile. Isenzi esingaqhelekanga asihambisani nemithetho efanayo yokuqhawula njengezenzi eziqhelekileyo. Bobabini isiNgesi nesiSpanish banezenzi ezingaqhelekanga kwaye zinokuba zikhohlisi kwezo zombini iilwimi. Ukukhunjulwa ngokuqhelekileyo kukukhohlakeleyo ukukhumbuza isenzo esingaqhelekanga sento. Iilwimi ezisekelwe kwiphononti eyabelana ngayo iprojugation iphethini ibandakanya i- composer , i- availability , i- exponer , i- imponer , i- oponer , i- proponer , i- reponer ne- suponer .
Ukhokelo lwangoku lwePoner
i- pongo , iipones, usted / ell / ella, i-nosotros / njenge-ponemos, vosotros / njenge-ponéis, ustedes / ellos / ellas ponen (ndibeka, ubeka, ubeka, njl)
u- pusiste , i- nosotros / njenge- pusimos , vosotros / njenge- pusisteis , ustedes / ellos / ellas pusieron (ndibeka, ubeka, wabeka, njl.)
yo ponía, tú ponías, usted / el / ella ponía, nosotros / njenge-poníamos, vosotros / njenge-poníais, ustedes / ellos / ellas ponían (ndandidla ukubeka, wawujwayele ukubeka, wayeqhele ukubeka, njl.
Ixesha elizayo ebonisa iPoner
yo pondré , tú pondrás , usted / el / ella pondrá , nosotros / njenge- pondremos , vosotros / njenge- pondréis , ustedes / ellos / ellas pondrán (ndiya kubeka, uya kufaka, uya kubeka, njl.
i- pondría , i- pondrías , i-usted / el / ella pondría , i-nosotros / njenge- pondríamos , vosotros / njenge- pondríais , ustedes / ellos / ellas pondrían (ndiza kufaka, uya kufaka, uza kufaka, njl.
Igalelo elikhoyo lePoner
ukuba u- pongas , u- ell / ella ponga , u-nosotros / njenge- pongamos , que vosotros / as pongáis , que ustedes / ellos / ellas pongan (ukuba ndibeka, ukuba uyifake , ukuba ayibeke, njl. ) U
u- yoo pusiera (i- pusiese ), i- tú pusieras (i- pusieses ), i- usted / el / ella pusiera (i- pusiese ), i- nosotros / njenge- pusiéramos (i- pusiésemos ), i- vosotros / njenge- pusierais (i- pusieseis ), i- ustedes / ellos / i-ellas pusieran ( pusiesen ) (endiyibekayo, obekayo, ebekayo , njl njl)
i- pongamos nosotros / njenge-potamis neotros / njenge- pongáis vosotros / njenge- pongan ustedes (beka, musa ukubeka, sibeke, masibeke, njl njl)
Ixesha eligqibeleleyo lenziwe ngokusetyenziswa kwefomu efanelekileyo ye- haber kunye nxaxheba ekudlulileyo , puesto . Ixesha eliqhubekayo usebenzisa i- estar kunye ne-gerund, iponiendo .
Iimpawu zesampula Ukubonisa ukuxubusha kwePoner kunye neeVenzi ezidibeneyo
Infinitive : Vamos i- poner la mesa. (Siza kusetha itafile.)
Ulungelelanise ngoku : U- he puesto la vacuna antirrábica al perro. (Ndiye ndinike i-anti-rabies vaccine inja.)
Ukhokelo lwangoku : Supongo ukuba i-tengo miedo. (Ndicinga ukuba ndiloyiko ngamanye amaxesha.)
Preterite : Vienes a decirnos que opusiste la resistencia, ¿no? (Uya kuza kuthi usichasene nokuchasa, akunjalo?)
Ukungapheleli : Cada día poníamos toda nuestra energía en la construcción de la casa. (Nsuku zonke sizakubeka amandla ethu kwakha indlu.)
Ixesha elizayo : El gobierno impondrá el control total. (Urhulumente uya kubeka ulawulo olupheleleyo.)
Unemiqathango : Akukho mveliso ye-los niños al agua contaminada. (Abayi kutyhila abantwana ukuba bangcoliswe ngamanzi.)
Ukuzithoba phantsi : Akukho i-haré nada que ponga en peligro tu vida. (Andiyi kwenza nto ebeka ubomi bakho engozini.)
Ukuthobela okungafezekiyo: I- Durante iyakwenza i-años el país ayiqinisekisi ukuba i- nucleares i- armas. (Iminyaka emininzi, ilizwe alizange liqinisekiswe okanye aliphikanga ukuba lalinalo izixhobo zenyukliya.
Imperative : ¡ Pon lo aquí! (Beka apha!)
Iintetho zamaFrentshi ~ Amagama
Iintetho ezili-10 eziphambili zesiFrentshi
Ukusebenzisa i- 'Tomar'
Ukusebenzisa 'Indawo,' 'Mal' kunye namazwi afanayo ngesiSpanish
Imizekelo yeZinguqulelo zoMzimba